Intsingiselo yemeko HIV kunye nendawo ngasemva ukubhula "ihlabathi", iqabane iimvakalelo?
トップページ ＞ 言語 ＞ コーサ語 ＞ Intsingiselo yemeko HIV kunye nendawo ngasemva ukubhula "ihlabathi", iqabane iimvakalelo?
Ikhadi le "impumelelo" Umendo
bhula ikhadi 3500 yen kwintsingiselo
umsebenzi abaxeli-mathamsanqa le "ihlabathi" isikhundla umva ukufumana apreyizali free "yeminqweno inzaliseko", njl elungileyo kakhulu intsingiselo "ihlabathi" na, siya zenzelwe ukuba kwakhokelela isiphumo neemeko ezingqonge kwakhe ikufanele kuzo zonke iinkalo.
Nangona eli khadi nguye webhunga Major Arcana, nto yaziwa ngokuba top-level phakathi kwabo njengoko umntu linentsingiselo elungileyo. amathemba Lee kunye neminqweno zizalisekile, kukho ukuqonda kokuba impumelelo, kodwa ngenxa yokuba uthabathe ngengqiqo ukuba ukugqitywa yokugqibela, ukuphuhliswa ngakumbi phambili kwakhona ndacinga nje ukuba kulindelwe.
indawo ezintle "ihlabathi" ibimele ukuba linokuthetha "ihlabathi", ethetha ukuba uyakwazi ukufikelela imeko omhle ukoyisa de umzabalazo kunye nobunzima, ubunzima le wena nayo. Yomelo abonwabileyo, ukuba uthando umtshato, ndibe isigqibo ukutshata isindululo kude kangaka kuye ukuba sele thina othandana. Ukuba
akukho mntu boyfriend ngoku, ngoko zingadlala kuqubisana sibi, andingekhe ndikukhanyele kungenzeka ukuba elinye iqela ungumntu lwekamva. Umntu na ukuba ukhathazekile ngayo ngothando ezingabuyekezekiyo ukuze ukuba okanye wafumanisa ukuba izinto kufuneka athande iimvakalelo zothando, ngamanye amaxesha ukusuka wayeza kuba naye singalindelanga wavuma.
kangaka iminqweno kunye mathemba azaliseka "ihlabathi", na umqondiso wokuba kunokwenzeka ukufumana ezingcono iziphumo ukuba silindele engqondweni yam. Ngenxa yokuba iimvakalelo zakhe bafuna kuni, ukuba uya kuba ukhathazekile yayiza kuba kungenzeka ukuba ube nempumelelo kwanokuba indlela kwabo siqu. Xa kokuchitha ixesha fun nabantu ababini, sicebisa ukuba wehlise umgama.
iqela iimvakalelo ukuba indawo ngasemva "ihlabathi" ibimele ukuba mean
"ihlabathi Ukuba intsimi "na indawo umva, ukuba umzabalazo kunye neenzame, ithetha ukuba uya kugqiba esithubeni kunzima ukuthi eyanelisayo.
umtshato uya kuba isindululo esivela ndicinge nzulu abaphikisi, okanye okubi ngokulula wavuma, kwindawo ebizwa ngokuba lover umtshato emva inyathelo elinye, ezifana ingxaki iba uthethathethwano ukuphelisa kwenzeka, akazange ezifunwa oku akuthethi ukuba umphumo. Ekubeni
iimvakalelo zakhe kusenokwenzeka ukuba ibhekiswe enye, ulwalamano lwabo kububulumko ukugcina imeko yangoku. Kuhle ukuya Kunzima ukuba azivume, kuba engenamsebenzi ukuba abantu iimvakalelo zimbini na ndibe kuba ntle mpi ithuba. Ukutshintsha ukuhamba lwekamva, zama ukugcina imeko, sicebisa ukuba ujonga kwi imeko kunye prayorithi phezu iimvakalelo zakhe.